Affiliations - Proton any California
Amin'ny maha foibe foibem-paritra, California Protons cancer Therapy Center dia miara-miasa amin'ireo marary avy amin'ny rafitra fitsaboana rehetra manerana an'i San Diego sy Etazonia. Na izany aza, izahay dia mirehareha manokana noho ny fifandraisanay izay niforonanay tamin'ny rafitra fitsaboana malaza.
Ireo fifandraisana ireo dia mamela antsika hanana fidirana bebe kokoa amin'ny fitsaboana fitsaboana proton mpamonjy aina ary handray anjara amin'ny fitsapana sy fikarohana ara-pahasalamana ilaina.
Izahay dia mirehareha rehefa mifandray amin'ny UC San Diego Health Cancer Network. UC San Diego (UCSD) Fahasalamana dia fonenan'ny Moores Cancer Center be mpitia - iray amin'ireo foiben'ny homamiadana izay voatendry any Etazonia. Tsara homarihina fa ny UC San Diego (UCSD) dia mahazo matetika ny vola ara-bola indrindra amin'ny famatsiam-bola ara-pitsaboana avy amin'ny National Institutes of Health, ary manana fitsapana klinika an-jatony amin'ny fotoana iray.
Toeram-pitsaboana Rady Ankizy-San Diego dia toeram-pitsaboana pediatrika 524 fandriana manome loharano lehibe indrindra amin'ny serivisy fitsaboana ara-pitsaboana pediatric feno any San Diego, atsimon'i Riverside sy kaominaly Imperial. Rady Children no hany hopitaly ao amin'ny faritr'i San Diego natokana ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana ny zaza ary io ihany no foiben'ny trauma pediatric. Ny programa momba ny homamiadan'ny zaza ao amin'ny Rady Children dia voatanisa tsy tapaka ao amin'ny tsara indrindra eto amin'ny firenena Vaovao amerikana & tatitra manerantany.